Focolare Movement အဖွဲ့အ စည်းမှ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ဦးဆောင်သော မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းတော်များ ဝတ်စောင့် ခြင်းနှင့် ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းအကြောင်း တ ရားကို် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၃) ရက်နေ့ထိ တောင်ကြီး ကက်သလစ်သာသနာ တောင်ကြီးမြို့ အောက်မေ့ဖွယ်ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင် ရာ ဝတ်စောင့်ခြင်းတွင် သာသနာအသီးသီး မှ ရဟန်းတော်များ ၅၉ ပါး တက်ရောက်ပါဝင် ကြပါသည်။ ၁၀ ရက်နေ့တွင် Fr. Joseph Braga က Who can separate us from the love of Christ? ( Rm: 8:35)၊ God’s Love: Transforming Gift to Humanity နှင့်ဆိုင်သော နှုုတ်ကပတ်တရားကို ဝေငှပို့ ချပေးခဲ့ပါသည်။
တစ်နေ့တာ ပို့ချသောအကြောင်း အရာများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဝေမျှခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ညနေ ၆း၃၀ တွင် တောင်ကြီးဂိုဏ်းချုပ် သာသနာ ဆရာတော် Basilio Athai မှ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို ဦးဆောင်ပူဇော်ခဲ့ ပါသည်။
၁၂ ရက်နေ့မှာ Pope Francis and the Church အကြောင်းကို Bishop Bobet Mallari မှ ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့် နောက် Living Communion in the Parish အကြောင်းတရားကို အုပ်စုလိုက်ဆွေး နွေးအဖြေရှာခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ညနေ ၆း၃၀ တွင် Bp. Mallari မှ မစ္ဆား တရားတော်မြတ်ကို ဦးဆောင် ပူဇော်ခဲ့ပါ သည်။
၁၄ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ရဟန်း တော်များဝတ်စောင့်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံခြင်းအစီ အစဉ်ကို မစ္ဆားတရားတော်မြတ်နှင့် ပိတ်ခဲ့ ပြီး နေ့လည်ပို်င်းတွင် သာသနာအသီးသီးမှ ရဟန်းတော်များ မိမိသာသနာမြေသို့ ပြန် လည်ထွက်ခွါခဲ့ကြသည်။